मानिसलाई कोरोना भाइरसले डिप्रेसनमा पुर्याएको छ । सामान्य कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं जब हाम्रो क्लिनिकमा कुनै विरामी आउछ त्यति बेला हाम्रो पहिलो सोच हुन्छ उसलाई ज्वरो त आएको छैन । जब हामी थर्मल गन तेर्साउछौ त्यति बेला पेसेन्टको मुटुको धडकन मात्र होइन हाम्रो पनि मुटु धड्किएको हुन्छ । यो यथार्थ हो भन्दा खासै फरक छैन […]
के कण्डमको प्रयोगले कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ ?
एजेन्सी । यहाँ मुख्य प्रश्न कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कण्डमले रोक्छ वा रोक्दैन भन्दा पनि शारीरिक सम्र्पकका बेला गरीने अरु क्रियाकिलापबाट कोरोना सर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु पर्दछ । कण्डमको प्रयोग गर्दै संक्रमितबाट कोरोना सर्दैन भन्ने हुदैन । कण्डमले यौनागंमा हुने संक्रमण बचाउँछ तर यौन क्रियाकलापका समयमा हुने अन्य गतिविधिबाट कोराना सर्ने संभावना उच्च हुन्छ । तसर्थ […]
किसको प्रकार ७, हरेक चुम्बनको अर्थ पनि फरक-फरक !
एजेन्सी । किस विशेषगरी प्रेमी प्रेमिकाले गर्ने गर्छन् । आफ्नो प्रेमी प्रेमिकासँग भेटघाट हुँदा गर्ने गर्छन् । किस गर्दा पनि बिभिन्न तरिकाहरु अपनाउने गरिन्छ । जुन तरिका आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौं । किस शारीरिक सम्पर्कमा मात्र नभएर आपसी सम्बन्ध राम्रो बनाउने एक उत्तम उपाय पनि हो । गालामा गरिने किस गालामा चुम्बन गर्नुको कारण […]
लामो आयु बाँच्न के के गर्ने ? यो प्रश्न हरेकको दिमागमा आउन सक्छ । जीवनभर निरोगी रहेर बाँच्नु सवैभन्दा ठूलो उपहार हो तर यस्तो त्यति वेला साकार हुनेछ जुनवेला हामीले प्रकृतिको नियमलाई आत्मासाथ गर्नेछौं । प्रकृतिलाई नमानेर जब हामी अप्राकृतिक ढंगबाट बाच्न थाल्नेछौं त्यतिबेला हामी रोगको दल-दलमा प्रवेश गर्न थाल्नेछौं । हुन त जन्मपछि मृत्यु […]
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, संक्रमित बिरामीको सम्पर्कबाट टाढै रहने, अनावश्यक भिडभाडमा नजाने गर्नाले बच्न सकिन्छ । मास्क प्रयोग गर्दा पनि केही सावधानी भने अपनाउनुपर्छ । यदि तपाइमा भाइरस संक्रमणको लक्षणहरुमा देखा परेमा। जस्तोः उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, तपाई कोरोना संक्रमित बिरामीको […]
रक्सी छोड्ने सफल उपचार (Successful Cure for Alcoholism) ! नेपालीहरूको सवैभन्दा खराब लत भनेको रक्सी, चुरोट, ट्याब, इन्जेक्सन आदि कुलत हुन । यस्तो कुलतलाई समयमा उपचार गरेमा सजिलैसँग निको हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान कमै व्यक्तिमा छ । त्यसैले आज मैले रक्सी (Alcoholism) का बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु । लागु पदार्थको रूपमा चिनिने रक्सी, […]
मानव स्वास्थ्यमा योगको ठूलो महत्व छ । योगविना यो जीवन अधुरो छ । मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो जसले योगको महत्व जान्दा-जान्दै पनि योग गरेको हुदैन । योग त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा हाम्रो शरीर, मन र आत्मालाई सकरात्मक तरिकाले एकसाथ समावेश गर्दछ, अध्यात्मको प्राप्तिका लागि एक दोस्रोसँग जोड्दछ । आज जतिपनि ठूला-ठूला माहात्मा बनेका छन्, […]
मानिस स्वस्थ त्यतिबेला रहन सक्छ जतिबेला उसले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चासो देखाउन सक्छ । उ बस्ने घर, कोठाको सरसफाई देखेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य रहन व्यक्तिगत सरसफाइमा जसले जति ध्यान दिन सकेको छ उसको परिवार त्यति नै स्वस्थ रहेको हुन्छ । स्वस्थ रहन व्यक्तिगत सरसफाई मात्रले सम्भव हुदैन त्यसका लागि खानपिनमा पनि भर पर्न […]
यस्तो छ योग र यसको महत्व
यस्तो छ योग र यसको महत्व, जानी राखौ । योग गर्नाले मानिसलाई स्वस्थ रहन धेरै मद्दत गरेको हुन्छ । योगबारे छोटो जानकारी आज मैले पाठक सामु पस्कन गइरहेको छु । योग मानिसले मात्र होइन पशुपन्छिले समेत गरेको हुन्छ । योग वा व्यायाम भन्नाले बिरामीका लागि मात्रै उपचार गर्ने विधि नभई यो एउटा प्राकृतिक स्वस्थ्य जीवनशैली […]
लामो समयसम्म यौन सम्पर्क नगर्दा देखा पर्ने समस्याहरु
एजेन्सी, लामो समयसम्म शारिरीक सम्पर्क राख्नुभएको छैन भने तपाईको शरीरमा धेरै खाले परिवर्तन आउन सक्छन् । यो थाहा नहुन सक्छ कि यस्तो परिवर्तन लामो समय शारिरीक सम्पर्क नगर्दा भएको हो भनेर । यो आलेखमा लामो समय शारिरीक सम्पर्क नगर्दा मानिसमा हुने शारिरीक तथा मानसिक परिवर्तनबारे उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धमा तितोपना कामेच्छामा परिवर्तन थकान महसूस […]
चिसो समयमा ओठ फुट्दा अपनाउनुपर्ने उपायहरु
चिसो समयमा ओठ फुट्दा अपनाउनुपर्ने उपायहरु, चिसो मौसममा बाहिरननिस्केमा पनि ओठ फुट्नबाट बचिन्छ, तर यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले बाहिर निस्कनुभन्दा अगाडि कुनै तैलीय पदार्थ ओठमा दल्नेर केही छिनपछि सूतीको कपडाले हल्का पुछेर निस्केमा केही रक्षा हुन सक्छ ।ओठ फुट्ने धेरैजसोव्यक्तिहरू बारम्बार जिब्रोले ओठ चाट्छन् । यसो गर्दा केही सन्चो भएजस्तो लाग्छ तर थुक सुकेपछि […]
रेकीले बदलेको मेरो चमकदार जीवन
बाह्र वर्षअघि माडवारी सेवा समितिमा मैले गुरु नवांगज्यूसँग रेकीको ग्यान लिएकी थिए । गुरुसँग त्यसपछि भेट भएन तर मैले त्यो साल दिनको रेकी ज्ञानलाई निरन्तर वृद्धि गर्दै गए । मैले आफुमा भएका सकारात्मक उर्जालाई मर्न दिईन । मैले पहिला त आफैलाई उपचार गरे त्यसपछि आफन्त र छिमेकीहरुलाई पनि गरे । जस जसलाई मैले रेकी दिए, […]
यस्तो हुन्छ एपेन्डिसाइटिस रोगका लक्षणहरु
एपेन्डिसाइटिस रोगले समयमा उपचार पाएन भने मान्छेको ज्यानै जान पनि सक्छ । एपेन्डिक्स भन्ने अङ्ग सुन्निएको अवस्थामा एपेन्डिसाइटिस हुन्छ । कहिलेकाहीँ त फुटिसकेको पनि हुन सक्छ । एपेन्डिक्स मानव शरीरमा पेटभित्र दाहिने कम्मरको अलि माथि सानो आन्द्रा र ठूलो आन्द्रा जोडिएको भागको पछाडिपट्टि रहेको अङ्ग हो । सन् १८८६ मा रेगीनाल्डले पहिलोपल्ट एपेन्डिसाइटिसका बारेमा तथ्य […]
थाहा पाउनुहोस्, सुत्ने समयमा महिलाले ब्रा लगाएर सुत्ने की नलगाइ ?
मेडिकल अनुसन्धानकर्ताहरुले लामो अध्ययन गरेपश्चात महिलाहरुलाई स्तन स्वास्थ्यमा जोखिम हुने भन्दै रातको समयमा ‘ब्रा’ नलगाउन सुझाव दिएका छन् ।अनुसन्धानकर्ताहरुले रातको समयमा टम्म–कसिलो ‘ब्रा’ लगाएर सुत्नाले स्तनको रक्तसन्चार तथा स्नायुप्रणालीमा नकरात्मक असर पर्नुका साथै अरु संक्रमणजन्य रोगलगायत स्तन क्यान्सरकोसमेत जोखिम बढ्ने बताएका छन् । महिलाहरुले सुत्दाखेरी भित्री कपडा ब्रा लगाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा फरक […]
पार्टनरले तपाइलाई धोका दिने संकेतहरु
सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि दुवैजनाको उतिकै साथ र समर्थन आवश्यक हुन्छ । एकजनाको साथ र समर्थनले कहिले पनि कसैको पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । सम्बन्धमा कहिलेकाही झगडा हुनु स्वाभाविक हो । पार्टनरमध्ये एकले विश्वासघात गर्न थाल्छन्, तब सम्बन्ध खराब हुन थाल्छ । पार्टनरलाई छल्ने, ढाँट्ने प्रवृत्ति कुनै न कुनै रुपमा प्रकट भइहाल्छ । जब पार्टनरले […]